Wholesale accessories - Xingliao Vagadziri uye Vatengesi
Wakagadzika mudiwa webhizimusi rako
Yakagadzwa muguta rakanaka reHangzhou muna2011, Hangzhou Xingliao Accessories Co., Ltd. inyanzvi yekutengesa zvinhu zvitsva zvemafashoni, kusanganisira baseball cap / ngowani, sikafu, magurovhosi, bhegi, masokisi uye bhandi nezvimwe.
Tine fekitori redu muHangzhou, uye isu tine mafekitori emubatanidzwa anopfuura 30 muChina. Mafekitori edu BSCI, SEDEX yakaongororwa, uye isu tine DISNEY uye rezinesi reNBCU, futi. Nedu hofisi yemusoro mudhorobha reHangzhou, isu zvakare tine mahofisi ebazi muTonglu neGuangdong, kuitira kushandira vatengi vedu zvakanaka uye nekuvimbisa zvigadzirwa zvese zvakarongeka.
Gore rega rega, isu tinogadzira uye tinogadzira mazana ezvigadzirwa zvitsva kune vatengi vedu. Isuwo tinotenga kune dzimwe nyika kuti tiwane kurudziro yezvinoitika zvitsva zvemwaka, zvinosanganisira mapatani matsva, mavara, shinda uye machira, uye mafashoni maitiro.
Zvakare, isu tinogara tichifunga uye tichiita tsvagiridzo mufekitori yedu, maitiro ekudzikisa mutengo pasi pevatengi vedu, tichichengeta iwo mwero wakaenzana wehunhu uye dhizaini. Sezvo isu tichiziva fashoni iri kukurumidza kwazvo, uye isu tinofanirwa kufamba nekukurumidza zvakanyanya pamwe nevatengi vedu.
Isu takavaka kudyidzana kwakadzikama nevatengesi vazhinji / vatengesi kunze kwenyika sePEPCO, C & A, NEW TARIRA, HEMA, Myer, LPP, JULA, Guess, Inditex & Pepe majini nezvimwe, zvichibva kumabhuruku ekumusoro-soro anoda zvigadzirwa zvakaisvonaka kusvika mufashoni. mhando dzine mitengo inokwikwidza zvakanyanya uye zvigadzirwa zvemhando yepamusoro.
Isu takazvipira kuzadzisa zvakasiyana zvidikanwi zveumwe neumwe mutengi ane yakazara uye nekukurumidza kuteedzera mukugadzira, kugadzira nekutengesa, ine hunhu hwakavimbiswa uye nenguva yekuendesa.
Tiine yedu yekugona inokwana kuita mazana mashanu ezviuru pamwedzi, tinogona kubata zvidimbu zvidiki zveMoQ zvidimbu mazana matatu, pamwe nemirairo mikuru kunge zvidimbu zvinopfuura miriyoni imwe. Vatengi kutenderera pasirese vanogamuchirwa neushamwari kuti tibate isu kuti muenderere mberi nekukurukurirana pamwe nekubatana. Tiri kuita nepatinogona napo kuwana zvese-kuhwina zvibereko zvine zvibereko kune vese vatengi vedu.